Ilay hazo fijaliana nentin’i Simôna
"Ary raha nandeha izy, dia nahita lehilahy Kyreniana anankiray, atao hoe Simona, ka izy notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesôsy" - Mat. 27:32.
Navesatra loatra ho an'ny Mpamonjy ny lanjan' izany noho ny faharerahany sy ny fijaliany. Hatramin'ny fanasan'ny Paska niaraka tamin'ny mpianany dia sady tsy nihinan-kanina Izy no tsy nisotro rano. Fadiranovana indrindra toy ny miala aina Izy nitolona tamin'ny famandrihan'i Satana (...) Nozakainy tamin'ny toetra matotra sy tamim-pahamendrehana izay rehetra nitranga teo amin'ilay sarintsarim-pitsarana manala baraka. Nefa kosa raha napetraka teo Aminy ny hazo fijaliana, rehefa avy nokapohina fanindroany Izy, dia tsy zakan'ny maha-olombelona Azy intsony izany. Lavo Izy, ana teo ambanin'ny enta-mavesatra.
Hitan'ny vahoaka nanaraka ny Mpamonjy ny fomba fandehany reraka sady mivembena, nefa tsy naneho fangorahana Azy izy ireo. (...) Tamin'iny fotoana izay dia nisy vahiny iray, Simona Kyreniana avy any ambanivohitra, nifanena tamin'ny vahoaka, reny ny teny feno fanivaivana niverimberina hoe: Omeo lalana ny mpanjakan'ny Jiosy. Nijanona izy, gaga raha nahita izany, raha naneho fangorahana izy, dia notazonina ka napetraka teo an-tsorony ny hazo fijaliana.
Efa nandre ny amin'i Jesôsy i Simona. Mpino ny Mpamonjy ny zanany, nefa ny tenany tsy mpanaraka Azy. Fitahiana ho an'i Simona ny nitondrany ny hazo fijaliana ho any Kalvary, ary taty aoriana dia feno fankasitrahana izy noho io fitondran'Andriamanitra io. Nitarika azy hitondra ny hazo fijalian'i Kristy noho ny safidim-pony izany, ka nahafeno fifaliana azy hatrany ny nitoetra teo ambanin'izany - IFM, tt. 800-801.
Ilay hazo fijaliana noterena nentin'i Simona no lasa anton-dresany. Feno fangorahana an'i Jesosy ny fony; ary ny zava-nitranga tao Kalvary sy ny teny nolazain'ny Mpamonjy dia nahatonga azy hahalala fa Izy no Zanak'Andriamanitra, - Ms, t 127.